Temple Cave Goa Giri Putri Temple ao amin'ny nusa Penida " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Tempolin'ny lava-bato ao amin'ny Tempolin'i Goa Giri Putri ao amin'ny nusa Penida
Tempolin'ny lava-bato ao amin'ny Tempolin'i Goa Giri Putri ao amin'ny nusa Penida. Bali
Tempolin'ny lava-bato Goa Giri Putri any Nusa Penida
Famerenana ny tempolin'ny lava-bato Goa Giri Putri Temple ao Nusa Penida
Matetika ny mpizahatany mitsidika ny vatam-bato misy vatosokay any amin'ny morontsiraka atsinanana (4 km avaratry ny tanànan'i Xuan). Misy tempoly hindoa akaikin'ny lava-bato. Alohan'ny hidiranao ao dia mila manala ny kiraronao ianao ary manadio kely amin'ny rano masina.
Amin'ny andro fialantsasatra dia mivory eto ny vahoaka marobe eto an-toerana, noho izany dia tsy ho vita ny fizahana mangina ny tempoly. Na izany aza, azonao atao ny mijery lanonana amin'ny atmosfera mandritra izay hanaovana ny hiram-mistika. Afaka mahita tempoly bodista kely sy stalactite goavambe ao anaty lava-bato koa ianao.
Ny lava-bato dia azo aleha amin'ny tohatra lava miakatra amin'ny havoana. Ny lava-bato dia miorina amin'ny haavon'ny 150 m. Raha ny tena izy dia manomboka eo anoloan'ny lava-bato ny faritry ny tempoly. Ao anaty lava-bato dia misy loharano izay heverina ho masina. Ny rano avy amin'izy ireo dia angonina amin'ny barika lehibe ary ampiasaina amin'ny fombafomba ara-pivavahana.
Fotsy ny rindrin'ny zohy satria vita avy amin'ny vatosokay ny tendrombohitra ao anatiny. Io vatosokay io dia nampiasaina hananganana tempoly any Penida. Noho io antony io dia fotsy izy ireo eto amin'ity nosy ity, ary raha any Bali kosa dia mainty izy ireo, vita avy amin'ny vatolampy volkano.
Ny efitranony dia misy efitrano lehibe 3 misy fitoerana masina ao. Ny sampana tsirairay dia manana sampana kely, noho izany dia azo inoana fa hitombo ny isan'ireo fitoerana masina amin'ny ho avy.
Maimaimpoana ny fidirana amin'ny tempolin'ny lava-bato. Fa raisina an-tanan-droa tokoa ny fanomezana. Na izany aza, misy ny mety tsy avela hiditra raha tsy misy fanomezana.
Vola fanomezana - 20 000 ropia. Na mihoatra, raha misy maniry.
Rehefa manome ianao dia voarakitra ao amin'ny boky fisoratana anarana. (Tsy voatery)
Ny tempolin'ny lava-bato dia miorina eo amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy Penida
Address: Suana, Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Bali 80771, Indonezia
Tempolin'ny lava-bato ao amin'ny Tempolin'i Goa Giri Putri amin'ny sari-tanin'ny nusa Penida nosy
Tempolin'ny lava-bato Goa Giri Putri
Tempolin'ny lava-bato ao amin'ny Tempolin'i Goa Giri Putri. Fitsipika mitsidika
Tempolin'ny lava-bato ao amin'ny Tempolin'i Goa Giri Putri. Inona no tokony hiomanana
Ity no fidirana mankao amin'ny tempolin'ny lava-bato